သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း သင့်ရဲ့ privacy ကိုအလေးအနက်ထားကြာပါသည်။ ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒကကျနော်တို့စုဆောင်းငါတို့သည်အဘယ်သို့အသုံးပြုရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘယ်အရာကိုသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ privacy ကိုမူဝါဒအ primer ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ရေးမူဝါဒများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
အားလုံးကို web server များကသူတို့ဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ကိုခြေရာခံ။ ဤအချက်အလက်တို့ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်, IP လိပ်စာများ, browser ကိုအသေးစိတ် timestamps တွေကိုနှင့်ရည်ညွှန်းစာမျက်နှာများကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ ဤအချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီ site ကိုမှတိကျသောဧည့်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်များလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခြေရာခံနေသည်။
အဘယ်မှာရှိလိုအပ်သော, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းပိုကောင်းဧည့်သည်အစေခံနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာနှင့်အတူဧည့်သည်ကိုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ဦးစားပေးများနှင့်သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
Advertising ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များနှင့်အခြားတတိယပါတီများမှလည်းကြေငြာများနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှဧည့်သည်များအားခြေရာခံကွတ်ကီး, script များနှင့် / သို့မဟုတ် web beacons သုံးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောခြေရာခံခြင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများမှတစ်ဆင့်တတိယအုပ်စုတွေကတိုက်ရိုက်ပြုသောအမှုများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
သင် privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့သင့် browser setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အချို့ဆိုဒ်များသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းငှါအဖြစ်အားလုံး sites များအတွက် cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။ အကောင်းဆုံး option ကိုတစ်ဦးနှုန်း-site ကိုအခြေခံပေါ်မှာ cookies တွေကို disable သို့မဟုတ် enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။ cookies တွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်များနှင့်အခြားခြေရာခံခြင်းယန္တရားများအဘို့သင့်ကို browser စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဒီစာရင်း web browser ကို privacy ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု လင့်များတွင်လည်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Google က Advertising ကြော်ငြာအကြောင်းအထူးမှတ်ချက်
မဆို Google က, Inc တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြော်ငြာတွေ, နှင့်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတွေဟာ cookies တွေကိုသုံးပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား cookies တွေကို Google ကသင်၏ဒီ site ကိုမှလာရောက်လည်ပတ်သူနှင့် Google ကြော်ငြာန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံကြော်ငြာတွေဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါ။ ဘယ်လိုသင်ယူ Google ရဲ့ cookie ကိုအသုံးပြုမှုများထဲကရွေးချယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း cookies တွေကိုနှင့်အခြားယန္တရားများမှတဆင့် Google ကပြုမိမည်သည့်ခြေရာခံ Google ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီ privacy ကိုမူဝါဒအကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုထပ်မံရှင်းလင်းချက်များအတွက် fitnessrebates@yahoo.com ဖို့ညွှန်ကြားထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီ website links များကိုရည်ညွှန်းနေဖန်ဆင်းတော်ဝယ်ယူမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပိုင်ရှင် www.fitnessrebates.com, က်ဘ်ဆိုက်များကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုချိတ်ဆက်နေဖြင့်ကြော်ငြာစရိတ်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောအမေဇုံ Associates မှ, Linkshare နှင့် CJ.com Affiliate Programs ကိုတစ်ဦးပါဝင်သူဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးသားချက်များအတွက်လင့်များအချို့သည် "Affiliate လင့်များ။ " ရှိပါတယ်ဒါဟာသင်က link ကို click နှိပ်ပြီးပစ္စည်း / ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်, ဒီ website ကိုတစ်ဦး Affiliate ကော်မရှင်ခံခြင်းငှါဆိုလိုသည်။ ဤရွေ့ကားလင့်များတတိယပါတီခြေရာခံခြင်း software ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင် link တစ်ခုပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦး cookie ကိုသင်ကတခြားအဆုံးအပေါ်တစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူ "လျှင်" ဒီ website မှာကော်မရှင်ခံယူစေမည်ကြောင်းသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာ set ပါလိမ့်မည်, ထိုရရှိလာတဲ့ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသွားလျှင်ဆိုလိုသည်။
မည်သို့ပင်, FitnessRebates.com သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများမှတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအကြံပြုသည်။ ကျနော်တို့ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ 16 CFR အ, အပိုင်း 255 နှင့်အညီ၌ဤထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း: "ထောက်ခံချက်နှင့်အသက်သေခံချက်အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်လမ်းညွှန်များ။ "
အမေဇုံ Affiliate ထုတ်ဖော်သတိပြုပါ:
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းအမေဇုံန်ဆောင်မှုများ LLC Associates မှအစီအစဉ်က်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များမှကြော်ငြာခြင်းနှင့် amazon.com ချိတ်ဆက်နှင့် Amazon ဝန်ဆောင်မှု LLC Associates မှအတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါမဆိုအခြားက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်ကြော်ငြာစရိတ်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများများကိုဒီဇိုင်းတစ်ခု Affiliate ကြော်ငြာအစီအစဉ်တွင်တစ်ဦးပါဝင်သူဖြစ်ပါသည် အစီအစဉ်
CJ, ShareASale, Clickbank Affiliate ထုတ်ဖော်သတိပြုပါ:
Fitness Rebates သည် CJ (Commission Junction), ShareASale နှင့် Clickbank ၏ဆက်နွယ်သောပရိုဂရမ်များတွင်ပါ ၀ င်ပြီး၊ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်း / ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် Fitness Rebates ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတွဲဖက်လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်စာရင်းသွင်းခြင်းခံရလျှင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ မှတ်ချက် - Commission Junction & ShareASale ၏တွဲဖက်ပရိုဂရမ်များသည်ကုမ္ပဏီအများအပြားမှထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
Google သည်တတိယပါတီရောင်းချသူအနေဖြင့် www.fitnessrebates.com တွင်ကြော်ငြာများအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဂူးဂဲလ်၏ DART cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် www.fitnessrebates.com နှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားဆိုဒ်များသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်အသုံးပြုသူများအားကြော်ငြာများကိုပြသစေနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် http://www.google.com/privacy_ads.html တွင်အောက်ပါ URL ရှိ Google ad နှင့် content network privacy ပေါ်လစီကိုသွားခြင်းဖြင့် DART cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သငျသညျကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကိုက်ညီဖို့ရွေးချယ်လျှင်, ငါတို့သည်အတူတကွနှင့်သင်၏အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၏ content ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်စခွေငျးငှါ
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှု။ ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းလက်ခံရရှိအချက်အလက်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, mail နဲ့တယ်လီဖုန်းထဲမှာ employ ဤအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်တူညီသောကာကွယ်မှုပေး။ ဤသည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်အခါ, သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံများကိုမဆိုတဆင့်တက်လက်မှတ်ထိုးသို့မဟုတ်ဤ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးကိုဝယ်ယူစေသက်ဆိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်မူဝါဒများကြည့်ပါ။
site ကို, သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ရ, မအလိုတော်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များရောင်းချသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်လျှင်
စုဆောင်းမှု၏အချိန်မှာအသုံးပြုသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ unaffiliated တတိယပါတီများမှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ e-mail လိပ်စာလျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ရောင်းချငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscription ကိုစာရင်းငှားရမ်းကြဘူး
ငါတို့သည်ဤ website နှင့်သင်တို့ဆီသို့စိတ်ဝင်စားမည်အကြောင်းအခြားကုန်စည် / န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အချိန်မီသတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့ e-mail လိပ်စာသုံးပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့သက်ဆိုင်သောဖက်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်အညီ, e-mail ကိုကနေတဆင့်ပေးပို့သတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ CAN-SPAM အက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေစလှေတျတျောအပေါငျးတို့သ e-mail, e-mail ကိုကနေသူသည်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလိမ့်မယ်
နှင့်ပေးပို့သူကိုဆက်သွယ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းအချက်အလက်များသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံး e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျလည်းမဆံ့ပါလိမ့်မယ်
သင်တို့သည်နောက်နောက်ထပ် e-mail, ခံယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးလ်စာရင်းထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့စုံစုံသတင်းအချက်အလက်များ
ရှေးခယျြမှု / Opt-Out
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုအသုံးပြုသူများသည်စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှဆက်သွယ်ရေးလက်ခံရရှိ၏ထွက်ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး
သူတို့အချိန်မရွေးငါတို့ထံမှလက်ခံရရှိမည်သည့် e-mail, ၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီးယူမှုဖျက်ညွှန်ကြားချက်။
e-mail ကိုအတွက်မှာယူမှုဖျက် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်သွယ်ရေး။
ဇြန္လ 10, 2013 FitnessRebates မှတ်ချက်မရှိ